Ndị ụgbọ elu Europe na -akwado nkwado maka oge oyi siri ike
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Europe » Ndị ụgbọ elu Europe na -akwado nkwado maka oge oyi siri ike
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ahụike • News • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Tourism • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
N'oge ihe a na -eme n'oge ezumike na Europe, ọrịa a nwere ike ime ka ọnọdụ ọrụ sie ike.
Ebe ego ka na -ebelata, ndị na -anya ụgbọelu nwere oge oyi siri ike n'ihu ha.
Ọdịiche ọhụrụ COVID-19 nwere ike belata njikere ndị njem ife efe.
Ụgwọ ọrụ ga -arị elu, a ga -ekpebikwa mkpebi siri ike n'ụzọ ego.
Ndị ụgbọ elu Europe ga -eche ihu n'oge oyi siri ike n'ihi ọrịa na -aga n'ihu na ntụkwasị obi njem nwere ike kwụsịtụrụ. Ọnụ ego dị ala ga -abụ isi ihe na -akpali agụụ n'ihi na enwere ike ịga n'ihu na mgbochi njem.
Ebe ego ka na -ebelata, ndị na -anya ụgbọ elu ga -enwe oge oyi siri ike n'ihu. N'oge ihe bụ omenala offseason na Europe, ọrịa na -efe efe nwere ike ime ka ọnọdụ ọrụ sie ike.
Agbanyeghị na ọchịchọ amalitela ịlaghachi n'oge ọkọchị a, oge oyi nwere ike bụrụ akụkọ dị iche. Ikpe COVID-19 nwere ike ibilite, yana ụdị dị iche iche nwere ike ịmalite, na-ebelata njikere ndị njem ife efe. Na ọtụtụ gọọmentị na -akwụsị nkwado oke iwe, gụnyere UK, ụgwọ ọrụ ga -agbarịrịrịrị, a ga -emekwa mkpebi siri ike n'ụzọ ego. A ga -enwerịrị ezigbo nguzozi n'etiti ije ọtụtụ ebe na idobe ọnụ ahịa ọrụ. Ụgbọ elu ga -abụrịrị nke ọma iji hụ na nlanarị.
Ndị njem nwere ike ịga n'ihu na -egbu oge njem njem oyi a n'ihi oke ejighị n'aka. Agbanyeghị na mwepụta ọgwụ mgbochi Europe na -aga nke ọma, ụdị Delta bụ nchegbu. Ebe ụfọdụ mba na -agbasi mbọ ike ibute nje a, mgbochi njem yiri ka ọ ga -adịgide. Njem atụmatụ ga-aga n'ihu na-agbagwoju anya n'ihu site na mgbochi na-agbanwe agbanwe dịka ihe achọrọ maka ule COVID-19 na-adịghị mma maka ịbanye n'ọtụtụ mpaghara. Ọzọkwa, ihe mgbochi njem bụ ihe mgbochi nke abụọ na -egbochi njem, yana 55% nke ndị nabatara na ntuli aka ụlọ ọrụ ọhụrụ na -ekwupụta ihe kpatara iji zere ime njem. Netwọk ụzọ ga -elekwasị anya na ebe njedebe nwere oke mgbochi na a ga -ewere usoro agile/na -anabata ya.
Asọmpi dị n'etiti ndị na-anya ụgbọ elu na Europe bụ pre-COVID dị egwu na ọnụ ahịa na-abụkarị ihe na-ekpebi ndị njem mgbe ha na-ahọrọ ụgbọ elu. N'ịbụ ndị ejighị n'aka na -achọkarị ike oyi a, ntinye akwụkwọ na -agba ume ga -abụ ebumnuche dị mkpa.
Ịbelata ọnụ ahịa iji kpalie ọchịchọ ga -abụ ụzọ a ga -ebuga n'oge oyi a iji mejupụta oche. Nke a nwere ike ịdọta 57% nke ndị na -aza ajụjụ na Europe kwuru ọnụ ahịa dị ka ihe kacha mkpa mgbe ị na -ahọrọ akara ụgbọ elu, dịka ntuli aka emere n'oge na -adịbeghị anya. Ọnụ ahịa ga-adị oke mkpa n'ịkwalite njem n'ime ụgbọ elu obere oge na ọnụ ahịa ụgbọ elu dị ọnụ ala nwere ike bụrụ ndị na-anya ụgbọ elu n'oge oyi a. Ebe ndị njem na -aga n'ihu na -aga nso ụlọ, netwọkụ sara mbara nke ndị na -ebu ụgbọ ala a kwesịrị ịrụ ọrụ maka ọdịmma ha.